Rugby – Fifanintsanana Olympika (JO 2021): mpilalaon’ny Makis 4 bevohoka najanona tsy hilalao | NewsMada
Eo am-piomanana ny fiverenana an-kianja, amin’izao fotoana izao, ny Makis de Madagascar, sokajy vehivavy. Hanomana ny fiadiana ny tapakila hiatrehana ny lalao Olympika (JO 2021). Misy anefa ireo mpilalao voatery najanona.
Raha tsy misy ny fiovana, hanomboka amin’ny zoma 18 septambra ho avy izao, ny fanazarantenan’ny Makis de Madagascar, sokajy vehivavy eo amin’ny rugby lalaovin’olona 7. Mpilalao 21 mirahavavy no nantsoina voalohany ka rehefa avy nandalo fitiliana ny valanaretina “covid 19” sy “test de grossesse”, fantatra fa nisy efatra mirahavavy mitondra vohoka ka voatery najanona.
Manoloana izany, nosoloina izy ireo ka nantsoina hanatevina ny Makis indray Raveloarinoro Mbolatiana Dinah, avy amin’ny 3FB sy Rasoanandrasana Volatiana Marie Fleuris, mpilalaon’ny FTFA ary i Oliniaina Fabrinah (Corra), an’ny FTM Manjakaray. Efa nandrafitra ny Makis ho an’ny rugby lalaovina olona 15 izy ireo.
Tsy hijanona amin’ireo ihany fa mbola hisokatra amin’ireo mpilalao hafa ny Makis ka mety hisy avy any amin’ny faritra ho antsoina amin’ny herinandro ambony.
Ankoatra izay, salama avokoa ireo mpilalao nantsoina satria miiba ny valin’ny fitiliana natao ka tsy misy mitondra ny valanaretina “covid 19”, izy rehetra. Tsiahivina fa hanoman-tena amin’ny lalao famerenana “repêchage”, hiadian-toerana hiatrehana ny lalao Olympika (JO 2021) ny Makis de Madagascar. Fihaonana, hotanterahina amin’ny volana mey 2021. Hateto, tsy mbola hay izay firenena hampiantrano izany.
Mialoha ny hiatrehan’ny Makis ny fanazarantena, nodiovina sy notondrahina fanafody, nanomboka omaly talata, ny kianja Makis Andohatapenaka. Anisan’izany ny efitrano fibatana fonjamby, ny kianja, ny “gradin”, ny “tribune” ary ny tokotany rehetra manodidina sy ny vavahady fidirana.
Tsiahivina fa tsy maintsy manaja ireo fepetra ara-mpahasalamana avokoa ireo mpilalao na manao fanazarantena aza.